एउटै बोकाको मुल्य साढे ४ लाख ! ३ लाखदेखि ४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बाख्राको पाठा! « Channel Np
एउटै बोकाको मुल्य साढे ४ लाख ! ३ लाखदेखि ४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बाख्राको पाठा!
प्रकाशित मिति : Thursday, May 9th, 2019 at 7:52 PM
झापाको हल्दिबारी गाउँपालिका–१ गोलधापका गणेश पराजुली एउटा बाख्राको पाठा ४ लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्छन् । बोयर जातको बाख्रा पाल्दै आएका पराजुलीले ३ लाखदेखि ४ लाख ६५ हजार रुपैयाँसम्ममा बाख्राको पाठा बिक्री गर्दै आएका छन् ।
‘प्रगति बोयर बाख्रा फर्म’का सञ्चालक पराजुलीले अहिले बोयर जातका १६४ वटा बाख्रा पालेका छन् । सानाठूला गरी सबै हिसाब गर्दा दुई करोड बढीका बाख्रा पाल्दै आएको पराजुलीले सुनाए । “पाठी २ लाख रुपैयाँ बढी र शुद्ध बोयरका पाठा ४ लाख ६५ हजार रुपैयाँसम्म बिक्री गरेको छु,” पराजुलीले भने ।
पाठा बिक्री गर्दा चार महिनाको र तौलका हिसाबले २० देखि २२ केजीसम्म हुने पराजुलीको भनाइ छ । बोयरको मासुभन्दा पनि पाठापाठी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले व्यवासाय सञ्चालन गरेको पराजुली बताउँछन् । पराजुलीको फर्ममा पाठापाठी खरिदका लागि देशका सबैजसो जिल्लाबाट ग्राहक आउने गरेका छन् ।
पाँच वर्षअघि सञ्चालनमा ल्याइएको फर्मको लगानी नै १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ पुगेको उनकी श्रीमती कल्पना पराजुलीले बताइन् । बैंकबाट २७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ ऋण लिएर फर्म सञ्चालन गरेको कल्पना बताउँछिन् । यसै वर्ष पराजुलीले २७ लाख रुपैयाँ बढी लगानी गरेर फर्मलाई थप विस्तार गरेका छन् । थप दुई सय बाख्रा आट्न सक्ने फर्म बनाएको कल्पनाले बताइन् ।